B52 dhibaatada ku xir
B52 dhibaatada ku xir 1 sano 9 bilood ka hor #1212
Waad salaaman tihiin.Marcus halkan .Ciyaad ka yaaban tahay haddii uu qof wax dhibaato ah ku saabsan xirmada Boeing B-52H CONECT FSX & P3D.Waxaan halkan ku muujiyey inay la jaan qaadayaan prepar3d v4 laakiin anigoo ku jira ka dib markii la rakibay muu muujin wax sawirro ah faylka doorashada waxaana ku dhacay markii aan isku dayay inaan xiro.
B52 dhibaatada ku xir 1 sano 9 bilood ka hor #1215
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 29
Waxaan xiiseyneyaa waxaad tiri, Waxaan baaray feylkan waana hubaa inaysan la jaan qaadi karin Prepar3D v4, si kastaba ha noqotee, qoraaga cusboonaysiinta (David Robles) waxay iska dhigayaan in la cusbooneysiiyay FSX NATIVE oo leh barnaamijka 'MCX' laakiin WAA LACAG LA'AAN. Moodooyinka ayaa wali ka socda FS2004. Marka, hadda waxaan sheegi karaa inay la jaan qaadi karto FSX iyo P3D ilaa VERSION 3 (ma aha 4). Waxaan cusbooneysiiyay bogga si aan uga tarjunto runta.
Waad ku mahadsantahay inaad arintan ii keento.
B52 dhibaatada ku xir 1 sano 9 bilood ka hor #1216
Cheers Erik.Yeah.Can way adag tahay mararka qaarkood ilaa aad ka maqashid qof shaqeeya oo aan shaqeynin. Waxaan kuu sheegi doonaa marka aan la kulmo qaar kale.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.189